सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्राको क्यामेरामा समस्या छ Androidsis
प्रयोगकर्ताहरूले सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्राको क्यामेराको साथ समस्या रिपोर्ट गर्न सुरू गर्दछ
अगस्टको सुरूमा एशियाई निर्माताले यसको प्रस्तुत गर्‍यो phablets को नयाँ पुस्ता, संग सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट २० र ग्यालक्सी नोट २० अल्ट्रा ठूलो घाउको रूपमा। र अधिक भिटामिनयुक्त संस्करणको उच्च मूल्यको बावजुद, यो वास्तवमै राम्रो रूपमा बिक्री भइरहेको छ। जे होस्, यस्तो देखिन्छ कि टाउको दुखाइ सामसु forको लागि आयो।
केहि भन्दा बढि किनभने, अधिक र अधिक उपयोगकर्ताहरू फरक रिपोर्ट गर्न सामसु photos तस्बिरमा फर्केका छन् सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्रा क्यामेरा समस्याहरू। सबैभन्दा खराब? यस फोनको दोषपूर्ण ब्याच जस्तो देखिन्छ।
सैमसंग ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्रा क्यामेरामा के समस्याहरू छन्?
यसको हेराईबाट, त्यहाँ सय भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूको रिपोर्टहरू छन् जसले ग्यालक्सी नोट २० अल्ट्राको पछाडि क्यामेरा मोड्युलमा देखिने प्वालहरू फेला पारेका छन्। साथै, केहि प्रारम्भिक प्रयोगकर्ताहरू पनि धुलो कण र कोडिंग बूँदाहरू भेट्टाए स्मार्टफोनको पछाडिको गिलास प्यानलको दायाँ तिर देखा पर्दै। यसको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप कभर गर्दै।
भन्नको लागि सैमसंग ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्राको क्यामेराको साथ समस्या यन्त्रहरूको सम्मेलनमा त्रुटिबाट आएको देखिन्छ। स्पष्ट रूपमा, सामसुले पहिले नै प्राप्त सबै रिपोर्टहरूको समीक्षा गरिरहेको छ र के समाधान खोज्ने भनेर हेर्दै छ। सम्भवतः, बेचेको एकाईहरू नयाँ मोडलले प्रतिस्थापन गर्नेछ।
भाग्यवस, यो यस्तो देखिन्छ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्रा क्यामेरा त्रुटि यो केवल दक्षिण कोरिया भित्र पत्ता लागेको छ, त्यसैले सिद्धान्तमा यूरोपमा आउने बेचहरूलाई यो समस्या हुने छैन। तर, यो टर्मिनलले आज बजारमा हिर्काउँदा, के तपाइँ यसलाई खरीद गर्ने जोखिममा जाँदै हुनुहुन्छ? जे भए पनि, यो प्रयोग गर्नका लागि अन्य प्रयोगकर्ताहरूले फोनको जाँच गर्न पर्खिनु राम्रो हुन्छ फोटोमा तस्बिर लिँदा यसमा अधिक त्रुटिहरू छन् भनेर पुष्टि गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » प्रयोगकर्ताहरूले सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट २० अल्ट्राको क्यामेराको साथ समस्या रिपोर्ट गर्न सुरू गर्दछ
गुगलको पिक्सेल and र पिक्सेलaए G जी मा पहिले नै नयाँ लीक हुने मिति छ
हामीले मन्स्टर ड्यासको परीक्षण गर्यौं प्ले स्टोरमा फर्केर आउँदा पूर्ण रूपमा कायाकल्प गरियो